I-Lovely Balcony, itshe eliyigugu elinelanga nelikhanyayo esikhungweni sase-Sibiu
(209 okushiwo abanye)
Sibiu, Județul Sibiu, i-Romania
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Laura
Elinye lamafulethi anesilinganiso esihle kakhulu esikhungweni somlando sase-Sibiu...5 izinkanyezi.Izibuyekezo zikhulumela thina.Sibonga kakhulu kubavakashi bethu bangaphambili futhi kusengaphambili ngalabo abazofika. KUBALULEKILE KAKHULU- sinikeza indawo yokupaka yamahhala egcekeni kanye ne-air conditioning yamahhala
Jabulela isimo sokuphumula nesiyingqayizivele kule ndawo ethule, enelanga & nenhlekele emaphakathi nedolobha laseSibiu. Indawo enhle, evulekile, enomoya, elungiswe ngokuphelele, enovulandi omuhle wezakhiwo, leli fulethi lihlala ngaphakathi kwesakhiwo somlando esasungulwa ngo-1868.
Eduze nje (amamitha angama-300) kuneBig Square kanye nezindawo zokudlela zasendaweni, amabha, nezitolo zekhofi. Indawo yabahamba ngezinyawo enezitolo ezincane ezinhle ingafinyelelwa ngobuningi. 5 imizuzu ukuhamba.
PHUMULA NJE... USEKHAYA.
Le ndawo enhle itholakala enkabeni yomlando yaseSibiu, amamitha angu-300 nje ukusuka e-Big Square futhi itholakala kunoma ubani ofuna ukuhlala eSibiu isikhashana noma isikhashana. Ukusuka kule ndawo ungafinyelela noma yikuphi enkabeni yedolobha ngokuhamba okufushane okuyimizuzu emi-5.
Uzosingathwa efulethini elihle kakhulu, elisendaweni yesi-2, elinesitezi sangempela sokhuni nefenisha yokhuni eqinile, enezicabha zangempela ezinengilazi enemibala, ingxenye yophahla embozwe i-fresco yasekuqaleni, esendlini ehlonishwayo eyasungulwa ngo-1868. ngumdwebi wezakhiwo wase-Austria, lapho iTransylvania isengaphansi koMbuso Wase-Austrian-Hungarian!
Uzothola ukwamukelwa okufudumele lapho ufika futhi sizozama ukwanelisa zonke izidingo zakho ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ifulethi lalungiswa ngokuphelele ngo-2017, linekamelo lokulala elilodwa elinombhede wendlovukazi lapho ungaphuma khona kuvulandi wezakhiwo wangasese omangalisayo (lapho onawo indawo yokubhema), indawo yokuhlala enesofa lokudonsa elinethezekile elenza umbhede wendlovukazi. eyabantu abangu-2, nendawo yokudlela. Ikhishi elivulekile linazo zonke izinto ezisetshenziswayo ezintsha: i-toaster, i-microwave, umshini wekhofi, iketela, iwasha izitsha, ihhavini likagesi nesitofu esikunikeza ithuba lokupheka wedwa. Amalineni, amathawula, iziliphu, izinto zokugeza (ukugeza umzimba, ishampoo, insipho ewuketshezi, iphepha lasendlini yangasese), i-WiFi esheshayo, ikhebula le-TV elinama-smart TV ekamelweni ngalinye, kuhlinzekwa okomisa izinwele. Ifulethi linamagumbi okugezela angu-2, elilodwa elisendaweni elineshawa, usinki kanye nendlu yangasese kanti elinye liseduze nefulethi ehholo elivamile elinendlu yangasese, usinki nomshini wokuwasha. Siyajabula ukukunikeza ikhofi, itiye, amanzi.
Ifulethi lethu linovulandi obukekayo ozonikeza umoya ozolile futhi onokuthula futhi kuhle ngempela ukuba nenketho enjalo ukuba maphakathi nedolobha!
Ifulethi litholakala ku-2nd floor ku-Filarmonicii Street, no.23, ap.4, 300 m ibanga ukusuka eBig Square, esakhiweni somlando esiyizitezi ezi-3, esikhungweni somlando saseSibiu. Indlu inegceke elingemuva, lapho ungapaka khona imoto yakho (indaba yokutholakala) ngaphandle kwenkokhiso. Ngisho noma indawo yokupaka egcekeni igcwele, indawo yokupaka yomphakathi ingaphesheya komgwaqo / ngaphansi kwamafasitela efulethini. Kuzoba khona inkokhiso encane ye-max. 2 RON / ngosuku (cishe u-0,40 EUR / ngosuku) phakathi neviki nangoMgqibelo (kusuka ngo-8 AM kuze kube ngu-06 PM), futhi mahhala ngeSonto. Ungakhokha ukheshi, e-RON, emishinini esemgwaqweni
Ukufinyelela kulula kakhulu, ngokuqondile ukusuka kumgwaqo omkhulu egcekeni futhi ngokushesha ngakwesokudla ungena esakhiweni. Indawo iphephile emini nasebusuku futhi iseduze kakhulu (100 m) ukusuka eTineretului Park enenkundla yokudlala yezingane enhle.
Siyakwamukela futhi sikusiza ukukuhlalisa. Sikunikeza mahhala igumbi lemithwalo elikhiyiwe ukuze ungene ngaphambi kwesikhathi noma uphume kamuva eduze nefulethi, ukuze wenze ukuhlala kwakho kuphumule kakhulu futhi kube nezimo.
Ukungena kuyavumelana nezimo, kuncike ekutholakaleni.
Ifulethi lisendaweni enhle, lizungezwe izindawo zokudlela namabha, futhi liwuhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka eSikweleni Esikhulu noma Esincane saseSibiu. Indawo igcwele izinto okumele zenziwe - izindawo zokudlela, amabha, umculo obukhoma, iminyuziyamu, amagalari obuciko, ukuyothenga, imicimbi yasemgwaqweni, imikhosi njll.
Ingxenye yedolobha Elidala yaziwa ngamabhilidi ayo amadala amahle kodwa futhi nokudla okuhle namakhefi kanye nezindawo zokudlela zasebusuku.
Indlu yethu ithule kodwa imigwaqo embalwa nje ukusuka kwezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili zasebusuku e-Sibiu: kusukela ngo-April kunendathane yezindawo zokucima ukoma namabha anethala kuBig & Little square, okuwuhambo lwemizuzu emi-5 nje ukusuka efulethini lethu.
Isiteshi Sesitimela Esiyinhloko sisezingeni eliphezulu. Ibanga elingu-1 km, kanti iSibiu International Airport iku-8 km ukusuka kule ndawo. Indawo yabahamba ngezinyawo enezindawo zokudlela ezahlukahlukene, amabha nezitolo ingatholakala eduze.
Okokuheha, ukubona indawo, izincomo zokuvakasha, imicimbi sicela uvakashele (URL HIDDEN) okuyiwebhusayithi esemthethweni yedolobha, ehunyushwe ngesiNgisi nangesiJalimane. Futhi ihhovisi leSibiu Tourism litholakala eBig Square (eduze kakhulu nefulethi lethu).
I-Open Air Museum isendaweni eqhele ngamakhilomitha angu-8 ukusuka enkabeni yedolobha, isakazekela endaweni engamahektha angama-96 futhi iwumbukiso omkhulu kunayo yonke e-Europe.
I-Paltinis Ski Slope kanye ne-Summer Fun Park yezingane (hhayi kuphela) (ebizwa ngokuthi i-Arena Platos) ingafinyelelwa ngemizuzu engu-30 ngemoto. Amachibi anosawoti e-Ocna Sibiului aqhele ngamakhilomitha angu-18 ukusuka enkabeni yedolobha lapho ungathola khona ngesikhathi sasehlobo amachibi anosawoti amaningi eYurophu lapho ungageza khona futhi uzizwe sengathi ngasolwandle.
Ifulethi liseduze kakhulu nezinto zokuhamba zomphakathi (imizuzu emi-3 ngokuhamba) futhi indawo yokupaka yomphakathi iphambi kwesakhiwo, ngaphansi kwamafasitela okuhlala negumbi lokulala.
Isikhumulo sezindiza sizofinyelelwa emizuzwini eyi-15 ngekhebhu (amatekisi angaba ngu-2 RON kuphela i-KM ngayinye. Esikhumulweni sezindiza, lapho ufika, ungakhipha imali yendawo (RON) ku-ATM ehholo lokufika.
Idolobha lethu liyidolobha elincane lasendulo futhi ayikho indawo eyodwa enkulu ongakwazi ukuya kuyo ngokuhamba ngezinyawo.
I-ayina nomshini wokuwasha kunikezwa ngaphandle kwenkokhiso.
4.97(209 okushiwo abanye)
4.97 · 209 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-209
Ifulethi litholakala emizuzwini emi-2 ngokuya eBig Square naseLittle Square. Futhi ingasaphathwa eyokuthi sitholakala eduze komgwaqo uCetatii, obizwa ngokuthi "umgwaqo omuhle kakhulu eSibiu".
Sihlala eduze kakhulu nefulethi futhi singanikeza usizo noma nini ezivakashini zethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sibiu namaphethelo